Faraveloma ho an'i Kamba kely | Malagasy eto Italia
Faraveloma ho an'i Kamba kely
Nampidirin'i superadmin ny Fri, 20/03/2009 - 14:50
Lasa namonjy ireo anjely kely marobe toa azy i Kamba kely omaly alakamisy 19 martsa.
Fiadanana ho an'ny fanahiny.
(Nadika avy tao amin'ny blog-n'i avylavitra)
Maro tamintsika no hahatadidy ny tantaran’i Kamba (na i Antefindrazana Tombotsara, amin’ny tena anarany, teraka tamin’ny 07 jona 2007 tao Mahabibo, Mahajanga). Ilay zazalahy kely nentina niakatra an’Iarivo mba hatao fandidiana tao amin’ny HJRA noho ny olana hatrany am-bohoka nahazo azy.Naseho an-gazety tao amin’ny Midi Flash tamin’ny volana jona na jolay 2008 tany ho any -volana nanaovana fandidiana azy indrindra - i Kamba tamin’izany fotoan’andro izany.
Androany maraina tokoa mantsy, raha niantso ny iray amin’ireo mpiara-mifarimbona amiko amin’ny fikarakarana sy fanohanana an’i Kamba ny reniny, dia niangavy fanohanana momba ny ho enti-manana ny hampidirana azy any amin’ny hopitalin’Androva - tratry ny fahatoranana i Kamba kely tamin’io fotoana io, ary efa an-dàlana ho any amin’ny hopitaly ry zareo - dia nandefasana crédit tamin’ny alalan’ny E-Recharge aloha ny reniny, no sady nafàrana fa raha vantany vao tonga manoloana mpitsabo dia miantsoa haingana aty Antananarivo mba hifampitàna vaovao momba ny tena fototr’aretina. Lasa iny crédit phone iny, dia niandry ny renin’i Kamba mba hiantso aho, saingy rehefa tsy nahandry intsony dia izaho no niantso mivantana azy. Navelany hipetraka tsara ny fanontaniako raha voarainy na tsia ny sandan’ny fahana nalefako, avy eo dia sady namaly ny faharaisana izy no nigogogogo nitomany nilaza fa
Nitomany tanaty aho, satria mbola tany amin’ny birao. Tsy haiko nofefena kosa izany nony tany an-katakonana tany. Naka bàhana aho, ary rehefa nahazo hery kely dia nanapariaka ny hafatra ho anareo namana rehetra - ialako tsiny izay tsy naharay mailaka avy amiko noho ny fo feno tafahoatra -
Izahay telo mianadahy mpikarakara ny vohikala dia ontsa tokoa ary miara-ory tanteraka amin'ny fianakaviany amin'izao andro manjombona izao.
Ho antsika izay mpitsidika eto dia maromaro ihany angamba no efa nahita ny tantaran'i Kamba: tato.
Isaorana anareo hatrany ny vitanareo na ireo nahafoy vola aman-karena na ireo nahafoy fotoana nahatsiarovana azy isan'andro indrindra fa nanolotra vavaka ho azy raha nanao antso avo teto izahay hanampiana ny hikarakarana ny fitsaboana azy.
Fiadanana ho an'ny fanahiny !